Bacriminta Organic Organic Gawaarida Iskeelka Gawaarida Noocyada Qalabka Mashiinka iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Turner Mashiinka Nadiifinta Neefsashada?
Mashiinka Turner Mashiinka Nadiifinta Naafada waa qalab halsano muhiim u ah warshad sameynta bacriminta baaxada weyn. Wareejiyaha compost ee taayirrada leh ayaa wareegi kara horay, gadaal iyo xor ah, dhammaantoodna waxaa ku shaqeeya hal qof. Giraangiraha isku-dhafan ee lugaha leh waxay ka shaqeeyaan dusha compost cajalad horay loogu sii xareeyay; mindiyaha wareega ee lagu rakibay durbaano wareegaya oo xoog leh oo ku hoos yaal santuuqa cagaf-cagafta ayaa ah qalab loogu talagalay isku-darka, kala-furidda ama dhaqaaqa xirmooyinka isdabajoogga ah.
Codsiga Nooca Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Mashiinka Turner Mashiinka Nadiifinta Naafada waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa halsano iyo howlaha ka saarida biyaha sida dhirta bacriminta dabiiciga ah, dhirta bacriminta isku dhafka ah, warshadaha qashinka iyo warshadaha qashinka, beeraha beerta iyo dhirta boqoshaada.
1. Ku habboon khamiirka aerobic, waxaa loo isticmaali karaa iyada oo lala kaashanayo qolalka qallalan ee qoraxda, taangiyada halsano iyo kuwa wareejiya.
2. Badeecadaha laga helo kuleylka aerobic-ka ee heerkulka sare waxaa loo isticmaali karaa hagaajinta carrada, cagaarka beeraha, daboolka qashinka, iwm.
1. Mashiinka Turner Mashiinka Nadiifinta Naafada horay u socon kara, gadaalna u soo jeesan kara si xor ah dhammaan dhaq dhaqaaqyadaasna hal qof ayaa wax ka qabta.
2. Qalabka bio-organic waa in marka hore lagu soo aruursadaa dhulka ama aqoon isweydaarsiyo qaab xariijimo ah.
3. Compost Turner wuxuu ku shaqeeyaa isagoo si fiican iskaga qoraya compost-ka qashinka lagu ururiyey ee horay loo sii ururiyey; mindiyo wareegsan oo lagu rakibay durbaan adag oo wareegaya oo hoos tegaya cagaf cagafyada ayaa ah aaladaha saxda ah ee la isku daro, la dabciyo ama lagu dhaqaajiyo compost is biirsaday.
4. Markaad rogto kadib, waxaa la sameeyaa raso cusub oo compost ah oo la sugo sii halsaneynta.
5. Waxaa jira heerkulbeeg compost ah oo lagu cabiro heerkulka compost si marka labaad loo rogo.
Faa'iidooyinka Nooca Gawaarida Nadiifinta Mashiinka Turner
1. Qoto dheerida leexashada: qoto dheer waxay noqon kartaa 1.5-3m;
2. Wareega weyn ee leexashada: ballaca ugu weyn wuxuu noqon karaa 30m;
3. Isticmaalka tamarta hooseeya: waxay qaadataa habka gudbinta tamarta tamarta gaarka ah, iyo isticmaalka tamarta ee isla mugga hawlgalku wuxuu 70% ka hooseeyaa kan qalabka rogista soo jireenka ah;
4. U leexashada iyada oo aan lahayn xagal dhintay: xawaaraha leexashadu waa isku mid, oo ka hooseeya barakicinta trolleyga guddoomiyaha, ma jirto xagal dhintay;
5. Heer sare oo otomaatig ah: waxaa lagu qalabeeyaa nidaamka korantada oo si otomaatig ah u kontaroola, marka leexleeyahaha uu shaqeynayo iyadoo aan loo baahnayn hawl wade.
Nooca Gawaarida Gawaarida Mashiinka Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka
Xulashada Nooca Gawaarida Gawaarida Gawaarida Mashiinka Mashiinka
Awoodda ugu weyn (kw)
Qalabka korantada ee korantada (kw)
Awood aan caadi ahayn (kw)
Wareeg u rogo (m)
U rog qoto dheer (m)
Hore: Haan Hangaraarado Horizontal
Xiga: Double Ku marooji Composting Turner